Iglasi entsha yeGorilla inokwenza ukuba i-iPhone 7 imelane ngakumbi | IPhone iindaba
Izikrini ezaphukileyo zinokuphelela kwi-iPhone 7 enkosi kwiglasi entsha yeGorilla
Ngokwam, kwaye ndiyathemba ukuba iyaqhubeka ngoluhlobo, andikaze ndibone nasiphi na isixhobo sam esiphathekayo esaphula isikrini, kodwa ndibone abantu besebenzisa i-iPhone okanye nayiphi na enye into eneselfowuni enescreen esinoyilo ekungekho mntu unokuthanda ukuba nalo. Kodwa oku kunokuba neentsuku, kuba uCorning thaca izolo i Isizukulwana sesihlanu seGorilla yeGlass kwaye iyakwazi ukusinda ekuweni okungaphezulu kweenyawo ezintlanu.
Nangona iglasi yeGorilla yeyona ibhetyi intle, ukuza kuthi ga ngoku khange ibekho ngaphandle kwengxaki yokwaphuka kwayo ngenxa yokuhla. U-Apple uhlala esebenzisa le glasi kwi-iPhone yayo, ngaphandle kwezixhobo ezikhutshwe ngo-2014 (njenge-iPhone 6) apho basebenzise into abayibiza ngokuba yi-Ion X-Glass, iglasi eyayikude kakhulu nomgangatho waleyo yenziwe nguCorning. Ii-iPhone 6s zisebenzise iglasi yeGorilla kwakhona, ngokuyinxalenye kuba ifuna i iglasi enganyangekiyo kunye nezimo ukuze i-3D Touch isebenze kunye neziqinisekiso.
Iglasi yeGorilla 5 iya kubonelela ngokuchasene nokuwa
Yintoni entle ngeNTSHA # IGorilla yeGlass5? https://t.co/CHdd4xBEHw pic.twitter.com/EH4xCEuCPt
-Corning ifakiwe (@Corning) Julayi 20, 2016
Uvavanyo lwe Corning ubonise ukuba isixhobo sixhotyiswe ngesikrini seGorilla Glass 5 ukusinda kwehla kubude beemitha eziyi-1.6 kwi-80% yamatyala. Nangona ipesenteji inokubonakala ngathi iphezulu, ndicinga ukuba, njengesiqhelo kwezi meko, banikezele ngedatha ethe kratya ethembisayo ukuze banganyatheli kwiminwe yabo, into efana naleyo yenziwa yi-Apple nge-Apple Watch yayo ngokungabhengezi kuyo ntetho ukuba ine-IPX7 certification.
Izixhobo zokuqala ukunyusa iglasi yeGorilla 5 kulindeleke ukuba zifike kamva kulo nyaka, ke i-iPhone 7 inokuthi ifike neglasi entsha yeCorning. Ukuba akunjalo, lowo uza kuza neGorilla Glass 5 iya kuba yi-iPhone yonyaka olandelayo, isixhobo esiya kuthi, ngokwamarhe onke, size notshintsho olubaluleke kakhulu, ngakumbi kuyilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Izikrini ezaphukileyo zinokuphelela kwi-iPhone 7 enkosi kwiglasi entsha yeGorilla
USaul Antonio Pardo sitsho
Ewe, bendingazi malunga neglasi ye-iPhone 6, ndine-iPhone 6 kwaye iye yawa amatyeli aliqela, kwizihlandlo ezi-2 kwisingxobo sam sehempe, ndilinganisa i-1.78 kwaye ngethamsanqa iglasi ye-iPhone yam ihambile, ukugoba okuncinci kwialuminiyam ukuba inayo, ndicinga ukuba ndibenethamsanqa.
Phendula uSaul Antonio Pardo
I-Apple ibekw 'ityala ngokufaka endaweni yezixhobo zayo ezihlaziyiweyo
URayman Classic uyathengiswa okwexeshana